अशक्त व्यक्तिको लागि अग्रणी GPS ट्र्याकर पहिचान गर्दै | सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर ऑटिज्म / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
अशक्त व्यक्तिको लागि अग्रणी GPS ट्र्याकरको पहिचान गर्दै
जब तपाइँको विशेष बच्चा हुन्छ, यो हर समय बचाउनको लागि अतिरिक्त सुरक्षा उपायहरू खोज्न विचार गर्न उत्तम समय हो। यही कारणले गर्दा आज म जीपीएस ट्र्याकरको बारेमा कुरा गर्न आउँछु जुन तपाईको उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो जब यो तपाईंको बच्चाहरूको गतिविधिहरूको अनुगमन गर्न आउँछ।
यो किनभने यी लोकेटरहरूलाई धन्यवाद छ तपाइँ सजिलैसँग तपाइँका बच्चाहरूलाई हराउन सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई जहिले पनि मानसिक शान्ति दिनेछ किनभने तपाईका बच्चाहरू कहाँ छन् भनेर तपाईलाई थाहा हुन्छ।
मैले किन GPS ट्रैकर किन्नु पर्छ?
साना बच्चाहरूको सुरक्षा जहिले पनि अभिभावकहरूको लागि प्राथमिकता हुन्छ, र जब तपाईं सानो बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईंले लिन सक्ने उपायहरूलाई हल्कासित लिनु हुँदैन। बच्चाहरू सजीलै कहिँ पनि हराउन सक्छन्, तसर्थ, ती तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन सक्षम हुनु आवश्यक हुन्छ।
iHelp 3G / 4G GPS ट्र्याकि W रिस्टब्यान्ड, किचेन (OMGGPS40D)
बच्चाहरूको लागि जीपीएस ट्र्याकरलाई धन्यवाद, तपाईंलाई तपाईंको बच्चा कहाँ छ भनेर ठ्याक्कै थाहा हुनेछ, र आपतकालमा, तपाईंलाई यो फेला पार्न विकल्प हुनेछ। त्यहाँ लोकेटरहरू पनि छन् जुन QR छ, जसले तपाइँको बच्चालाई तपाइँसँग कुराकानी गर्न फेला पार्ने सबैलाई अनुमति दिनेछ।
तपाईंको बच्चाको जहिले पनि जहिले पनि जान्ने मनोशान्ति अमूल्य छ। म स्कूलमा पुग्दा कसरी सन्देश प्राप्त गर्ने? र चेतावनी यदि तपाईंले आफ्नो सामान्य मार्ग छोड्नुभयो भने? बच्चाहरूको लागि लोकेटरको साथ, तपाईंसँग यो हुनेछ।
बच्चाहरू आज हामीसँग पहिलेको पुस्ताहरू जस्तै स्वतन्त्रताको आनन्द लिन सक्दैनन् तर उनीहरूसँग मद्दतको लागि सबैभन्दा नयाँ टेक्नोलोजी छ।
बच्चा लोकेटरहरूलाई धन्यवाद हामी केवल उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मात्र थाहा पाउँदैनौं तर उहाँसँग सम्पर्कमा पनि पर्न सक्छौं। केही मोडेलहरूले तपाईंलाई चेतावनी कल गर्न अनुमति दिन्छ यदि कुनै दुर्घटना हुन्छ र अन्य धेरै सुविधाहरू जुन हामी तपाईंलाई तल भन्छौं।
उसलाई निरन्तर साथ बिना नै केही स्थानहरूमा एक्लै जान अनुमति दिँदा त्यसले अझ ठूलो स्वतन्त्रता र आत्मविश्वास विकास गर्दछ।
तपाईंको बच्चालाई एक बच्चा हुनको लागि सुरक्षाको साथ जान्न दिनुहोस् कि ऊ कहिल्यै एक्लो हुनेछैन।
म किन मेरो बच्चासँग बच्चा ट्र्याकर प्रयोग गर्ने?
ऊ एक्लै स्कूल जान्छ
तिनीहरू धेरै छिटो हुर्कन्छन् र यस वर्ष उनी एक्लै स्कूल जान चाहन्छन्। तपाईं कोनेहरू पछाडि उहाँलाई पछ्याउन सक्नुहुन्न मानौं तपाईं एक जासूस हुनुहुन्छ। उसलाई स्वतन्त्रता र सुरक्षा मार्ग चाहिन्छ जसलाई थाहा छ कि उसले आफ्नो बाटो छोडेको छैन। तपाईंको ब्याकप्याकमा वा तपाईंको बेल्टमा बच्चा लोकेटर राख्नुहोस्।
Agglomeration मा बर्खास्त
एउटा सानो संकेत र अब हाम्रो छेउमा छैन। सुपरमार्केटमा, मेलामा वा कुनै पनि समूहमा तपाईं हाम्रो हातमा जान दिनुहोस् र डराउन सक्नुहुन्छ। बच्चाको लागि उसको घडीमा उसलाई कल गर्नुहोस् र तपाईंको आवाज सुनेर शान्त हुनेछ जब सम्म तपाईं उहाँसँग फेरि हुनुहुन्न र सबै कुरा डराउँदछ।
सबै भन्दा पहिले सुरक्षा
ऊ चुपचाप स्वि the्समा खेलिरहेको छ, हामीले केहि क्षणको लागि मोबाइल फोनमा हेरेका थियौं र त्यसले हामीलाई मुटु दिन्छ जब हामी माथि हेर्छौं र अब उहि ठाउँमा छैन। तपाईंको मोबाइलबाट जाँच गर्नुहोस् जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ वा तपाईंको बच्चा लोकेटरबाट सूचना प्राप्त गर्नुहोस् जब निश्चित दूरी टाढा सारिन्छ।
यी सबै केसहरूमा विशेष बच्चा लोकेटर तपाईंको ब्याकप्याक, बेल्ट… वा हाम्रो बच्चाको नाडीमा राख्नु पर्छ। यो पनि एक ग्यारेन्टी हो कि कुनै पनि दुर्व्यवहार एक खुशी र द्रुत अन्त्य काफी खोज समय घटाउने छ।
यद्यपि तपाईं माथिका कुनै पनि केसमा नहुनु भए पनि तपाईले घरका साना बच्चाहरूलाई सुरक्षाको विकल्पलाई मात्र सावधानीको रूपमा विचार गर्नुपर्छ। कहिलेकाँही, एक सानो व्याकुलताले हामीलाई यसमा राखिएको सबै हेरचाहको बाबजुद पनि ठूलो डर पुर्‍याउन सक्छ।
तर वास्तवमा के हो र बच्चा लोकेटरहरूले कसरी काम गर्छन्?
बच्चा लोकेटर एउटा सानो उपकरण हो जुन बच्चाको ब्याकप्याक वा कपडामा राख्न सकिन्छ। कहिलेकाँही यो आवश्यक हुँदैन वा तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि तपाईंको लक्ष्य के हो। यो एउटा घडी, कुञ्जी औठी वा लटकन हुन सक्छ। यी उपकरणहरूले हामीलाई सूचित गर्दछन् यदि बच्चा हाम्रो पक्षबाट टाढा जान्छ। साथै यदि तपाइँ एक क्षेत्र सुरक्षित रूपमा कन्फिगर गरिएको छोड्नुभयो भने। तिनीहरूले पनी तपाईंलाई तपाईंको स्थिति सँधै थाहा दिन्छन्। र सबै एक साधारण मोबाइल अनुप्रयोग को माध्यम बाट।
बच्चा लोकेटरहरूको केहि अधिक परिष्कृत मोडेलहरूले हामीलाई हाम्रो बच्चासँग कुराकानीमा वा उनलाई आपतकालिन कल गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
टेक्नोलोजी र प्रदर्शनमा निर्भर गर्दै हामी अन्यहरू भन्दा बढी भरपर्दो उपकरणहरू फेला पार्न सक्दछौं। हामी फराकिलो दायरामा रुचि लिन सक्छौं वा यदि तिनीहरूसँग जीपीएस छ वा छैन। उनीहरूले GPS / LBS प्रयोग गर्दछन् कि भनेर जाँच गर्न रोचक छ। केहिलाई उनीहरूको सेवाहरू पहुँच गर्न सदस्यता चाहिन्छ र अरूले गर्दैन।
बच्चाहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ लोकेटर छनौट गर्न मैले के विचार गर्नुपर्छ?
जीपीएस ट्र्याकिंग धेरै उपयोगी हुन सक्छ तर यो सधैं बच्चाको नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रविधि हुँदैन।
त्यहाँ बाल लोकेटरहरूको बिभिन्न प्रकार छन् र प्रत्येक एक विशिष्ट प्रयोग र समाधानको लागि डिजाइन गरिएको हो। आवश्यकताहरू बच्चाको उमेर, दूरी जुन यो प्रभावकारी छ, र निगरानीको प्रकारमा निर्भर गर्दछ।
सबै परिप्रेक्ष्यहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्, यस तरिकाले, तपाईं एक हेराईमा निर्णय लिन सक्नुहुन्छ कि बच्चाहरूको लागि कुन लोकेटरहरूको मोडेलहरू तपाईंको आवश्यकताको लागि उपयुक्त छ र कुनचाहिँ अप्ठ्यारो छैन। र त्यसैले धेरै सजिलैसँग आफ्नो बच्चाको लागि ब्राण्ड र प्रविधिहरूको बिभिन्न विविधताका बीच छनौट गर्नुहोस्।
4893 कुल दृश्यहरू7हेराइ आज